SomaliTalk.com » Faarax Qare 2013: Badeena waa lagu soo Duulay, waana in aan noqon dad wax loo yeeriyo maalin kastana ay warqado u soo diyaariyaan shaqsiyaad sheeganaya inay ka socdaan Beesha Caalamka
“Badeena waa lagu soo Duulay, waana in aan noqon dad wax loo yeeriyo maalin kastana ay warqado u soo diyaariyaan shaqsiyaad sheeganaya inay ka socdaan Beesha Caalamka” ayuu yiri Jan, Faarax Qare oo sheegay in dhibaatada lagu hayo Badda Soomaaliya aanay ahayn mid halkaan lagu soo koobi karo. Hadalkaasi waa sidii uu 2013 ka rumaysnaa badda Soomaaliya.
Warbixintan waxay SomaliTalk kusoo baxday Sept 30, 2013… Hoos ka akhri
Sawiro kale halkan ka eeg
Kulan ay yeesheen Aqoonyahanada Badda Soomaaliya oo sheegey in Badda Soomaaliya lagu soo Duuley.
Hotelka Kuwait Plaza ee agaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen in ka badan 50-Aqoonyahanada Badda Soomaaliya, kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd isbarasho, is Wareysi iyo Aqoon isweydaarsi. Aqoonyahanada Badda Soomaaliya ee kulanka ka soo qeyb galay waxaa ka mid ahaa khubarro, XeelDdheerayaal, Madax iyo Badmaaxiin dhinaca Badaha horay uga soo shaqeeyay, waxaana ka mid ahaa: Eng. Cadde oo ah Bare dhinaca Badda iyo howlaha Kalluumeysiga Soomaaliya.
Daabacadii warbixintan ee Sept 30, 2013 HALKAN KA DAALACO